Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Tyrone Mings Childhood Story Plus Ihe Nkwupụta Banye Na-adịghị Eke Ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha "Ọgụ“. Anyị Tyrone Mings Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ịrị elu nke Tyrone Mings. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail, iTV, TbrFootball na wdg
Nchịkọta ahụ na-emetụta ndụ ya mbụ / nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịkọ ọrụ mbụ, ndụ ọrụ ya mbụ, ụzọ ama ama, ibilite na ama akụkọ, ndụ mmekọrịta, ndụ nke onwe ya, akụkọ ezinaụlọ ya, ụdị ndụ ya na akụkọ ndị ọzọ na - amaghị banyere ya.
Ee, ọtụtụ ndị amatara ama ya n'oge m na agba m maka England, egwuregwu izizi nke ndị mmadụ na-ekwu na ndị ọchịagha Bulgarian kpuchiri ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Tyrone Mings nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Tyrone Deon Mings na ụbọchị 13 nke March 1993 na nne ya, Dawn Johnson na nna, Adrian aKA Adie Mings nọ n'obodo Bath, United Kingdom. Amụrụ ya dịka nwa nwoke naanị n’ime ụmụ nwanyị atọ mụrụ nne na nna ya mara mma, ndị sitere n ’agbụrụ dị iche iche.
Zute Ndị nne na nna Tyrone Mings - Dawn Johnson na Adie Mings. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Tyrone Mings sitere na ezinụlọ ya si Barbados site na nna ya. Dị ka a hụrụ n'okpuru, nke a bụ obodo agwaetiti dị na mpaghara Caribbean dị na North America. Ị maara?… Ọ bụ ebe amụrụ onye ọbụ abụ a ma ama Rihanna. Dị ka ógbè shuga bara ụba, mba ahụ ghọrọ obodo Bekee nke azụmahịa ohu Afrịka gburugburu 1807. Nke a na-egosi na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị isi ojii niile nke Barbados gụnyere nne na nna ochie Tyrone Mings nwere mgbọrọgwụ ndị Africa.
Tyrone Mings Family sitere na ya kọwara. Ebe E Si Nweta Foto: WorldAtlas
Tyron Mings nwere ndụ siri ike n'oge ọ ka tolitere n'akụkụ nne ya na ụmụnne nwanyị atọ. Mgbe ọ bụ nwata, ọ hụrụ mmekọrịta dị n'etiti nne ya na nna ya ka ha na-ekewa, emechara ya na nne ya kpọpụrụ ya na ụmụnne ya ndị nwanyị. Na mbido, ha gara biri na ezigbo enyi nne ya na Chippenham (Obodo na England) ebe odighi uzo ozo. Otu ụbọchị, Mings abụọ ahụ, nne ya na ụmụnne ya nwanyị n'ihi nsogbu ndị ha na-akpata, kpebiri ịhapụ ebe ahụ, enweghị ebe ọzọ ha ga-aga na enweghị ego iji nweta ụlọ ọzọ.
Ọ bụ ezie na ọ na - akọwa ihe banyere ezinụlọ ya dara ogbenye na otú e si zụlite ya Telegraph, o kwuru na ndụ gbanyere mkpọrọgwụ mgbe ha chere ihu na enweghị nhọrọ ọzọ karịa ibi n'ụlọ ebe obibi na-enweghị ebe obibi. Mgbe Mings nọ n'ụlọ ndo Mings, nne ya Dawn na ụmụnne nwanyị atọ ndị ọzọ na-ebikọ akwa abụọ.
N'oge ndụ nwata ya, Tyrone Mings, nne ya & ụmụnne nwanyị niile biri na ụlọ enweghị ebe obibi. Ebe E Si Nweta: VoiceofOC & Daily Mail
Ọ bụghị onye ọ bụla nọ n'ụlọ ebe ahụ dị ha mma. Ma nne, nwa nwoke na ụmụ nwanyị biri ndụ jọgburu onwe ya dịka ọ fọrọ nke nta ka ihe ọ bụla kọọ banyere ọha kpọọ ya…; ebe a na-asa ahụ, ụlọ mposi, ebe a na-asa mmiri, wdg.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Mgbe Mings bi n'ụlọ na-enweghị ebe obibi, o chere mkpa ọ dị ịga ụlọ akwụkwọ iji mepụta ihe na ndụ ya. Ọ pụọ n'ụlọ akwụkwọ, football ghọrọ nzọpụta ya na naanị isi iyi nke ngụgụ obi pụọ na nsogbu ndị nwere nsogbu.
Ejikọtara Tyrone Mings Education na football. Ekele si HPR na DailyMail.
N'ịdị mma karịa nwatakịrị ọ bụla ọzọ na egwuregwu ahụ, Tyrone Mings maara na ya nwere nkà ahụ ma nwee ike ịme football site na football. N'ịtụle ụdị ihe isi ike o chere n'oge ahụ, naanị ihe ọ chọrọ bụ iji bọl mee ihe iji nweta ndụ ezinụlọ ya dara ogbenye.
Iji nweta ezigbo ọrụ ọ malitere, ọ malitere ịbanye onwe ya karịa na mpaghara egwuregwu bọọlụ, na-amụta azụmaahịa football ya dịka onye na-agbachitere ya siri ike & nke na-enweghị ike. Laa azụ n'oge ọ na-agba bọl, ndị nkiri maara akụkọ banyere ezinụlọ Tyrone Mings na ebe obibi na-enweghị ebe obibi gosipụtara ya nkwanye ùgwù + ụfọdụ dị ka mgbe ha enweghị obi abụọ na ọ na-aga n'ụzọ ziri ezi.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Ndụ Ndụ Mmalite
Nganga nke nne ya na ụmụnne ya nwanyị amaghị oke mgbe a na-akpọ Mings nasiibia site na ịrụsi ọrụ ike na mkpocha ka ọ gaa ule football na ụlọ akwụkwọ Southampton. Na afọ asatọ (afọ 2001), edebara aha Mings n'ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka ọ gafesịrị ọnwụnwa na agba agba.
Tyrone Mings Early Life na Football- daysbọchị ya na Southampton Academy. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail
Mgbe ọ sonyere, ọ bụ ihe obi ụtọ maka onye na-eto eto onye agbachitere. Mana Tyrone Mings na-eto eto nwere ịchụ ọtụtụ ihe iji wee tozuo site na ọkwa agụmakwụkwọ. Inbụ otu n'ime agụmakwụkwọ kachasị mma na England, nke wulitere talent ụwa - ụdị nke Alan Shearer, Gareth Bale wdg, enwere nnukwu asọmpi maka ebe yana egwu nke ọbara.
Afọ 2009 bụ afọ kacha njọ n’ezie maka ezinụlọ Tyrone Mings. Ndị Sịnetọ wepụrụ onye na-ekwe nkwa na 2009 (agadi 15) mgbe agụmakwụkwọ kwuru na ọ bụ n'ihi nsonye ego ntorobịa ya.
Tyrone Mings dara ada ọ bụghị naanị n'ihi ihe akpọrọ 'mmefu ego'mana n'ihi na klọb ahụ boro ya ebubo na ọ dị oke ntutu ma ọ bụ dị fechaa. Ha amaghi na ha na-emehie nnukwu ihe na itufu 6 ukwu nke 5 n’abia (Tyrone Mings elu) etiti ejikọtara ọnụ na ọ ga - abụkwa onye egwuregwu England nke ga - eme n'ọdịnihu.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Ụzọ na-eme ka a mara aha
Onye egwuregwu ọ bụla a zụlitere site n’ezinaụlọ ezighi ezi ma bie ndụ site na ụlọ akwụkwọ ịgba bọmbụ jụrụ ya, ọ ga-amata na ọ bụ ihe mgbu miri emi na nsonaazụ ọ na-emebi. Site na obere ma ọ bụ enweghị ntụkwasị obi maka egwuregwu ahụ, Tyrone Mills dara ogbenye kpebiri ịhapụ ịgba bọl mgbe ọ bụ 15. O di nwute !!
Tyrone Mings gara n’ihu ịchọ ọrụ na Chippenham, nnukwu obodo azụmaahịa azụmahịa na ugwu ọdịda anyanwụ Wiltshire, England. Ọrụ mbụ ọ rụrụ bụ ụlọ mmanya (ụlọ ezumike ọha na eze) ebe ọ dọtara pints (biya na-enye ọrụ) maka ụgwọ ọnwa nke 45-kwa izu. N'ịgbakwunye ego ya iji kwụọ ụgwọ, Tyrone kpebiri ịga chọọ ọrụ ọzọ.
Ebe ndị White Hart dị na Chippenham ebe Mings dọtara ọnụ. Ebe E Si Nweta Foto: EuroSports na TheSun
Mings mechara nweta ụgwọ na-adụ ọdụ gbasara ọrụ (onye na-adụ ọdụ), ọrụ dị mma iji kwụọ ụgwọ ya. Mgbe ọ na-arụ ọrụ, ọ gara ụlọ akwụkwọ Millfield na Somerset ruo afọ abụọ. Afterlọ akwụkwọ ahụ mgbe ọ nụsịrị akụkọ mkpesa obi ya nwere ụdị enyemaka inye ya ohere ịgụ akwụkwọ maka ịgba bọl, ntụpọ nke mere Mings tụgharịrị uche ya ma laghachi na football.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Ọ Na-eme Ka A Maara Gị
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, agụmakwụkwọ Mings mere ka ọ banye n'akụkụ na-abụghị ọgbakọ nke Yate Town na Gloucestershire. N'ebe ahụ, nwa nwoke dara ogbenye malitere ịlụ ọgụ. N'oge ọkọchị nke 2012, o buliri elu ka ndị otu ụlọ obodo Chippenham Town nabatara ya. Klọb ahụ nyere ya ohere ịga ọtụtụ ọnwụnwa ebe ọzọ n'ihi na ọ gbabeghị ndị otu n'ihi ekele ya.
Enyere Tyrone Mings akwụkwọ agụmakwụkwọ football nke nyeere ya aka ịlaghachi na football. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun
Mgbe ọnwụnwa ndị dara ada na Cardiff City, Swindon Town, Portsmouth na Bristol Rovers, Mings nwere mmụọ na-anaghị anwụ anwụ dọtara uche nke onye mbụ na-agbachitere Ipswich Russell Osman bụ onye kpebiri inyere ya aka. Dika ihu chi ga-enwe, Osman tụrụ aro Mings ka onye isi Ipswich Town Mick McCarthy bụ onye kpọrọ ya oku maka ikpe.
Kama isisasị n’obodo Ipswich, onye na - agbachitere ihe na - eto eto siri ike site n’ike gaa n’ike, na - esikwa n’obodo dị nso rue dike na - enweghị nchegharị na inyeghachi onye isi ya (onye enyemaka ọdịnihu) ya na ezigbo ihe ngosi ya.
Tyrone Mings toro site na ume wee sie ike na-amasị nna ya ukwu. Ebe E Si Nweta Foto: TheSun
Mmalite nke mmeri ya bịara mgbe ọ nyere onye ọkpụkpọ Championship nke mmeri nke ọnwa aka na oge 2014 / 2015. Nke a dị n'otu dọtara ndị klọb Premier League ndị rịọrọ ka ikpere ha maka mbinye aka ya.
Na 26 June 2015, Mings bịanyere aka na AFC Bournemouth. Iji zere ịsọ mpi maka ebe, ọ kwagara ịkwaga Aston Villa na mgbazinye ego. Mkpebi a gbanwere nnukwu ọrụ na ọrụ ya. Na Villa, onye na-agbachitere 6-ukwu-5 agbachitere kwụsịrị a meteoric ibili ka onye ama. Ọ ghọrọ otu n'ime ndị ikom kpakpando ndị nyeere Villa aka ka o merie na egwuregwu 2019 EFL Championship.
Tyrone Mings ghọrọ onye ọkacha mmasị dị ka ọ na-enyere Villa aka na ntanetị maka asọmpi egwuregwu EFL Championship 2019. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Mgbe o nyesịrị Aston Villa aka ịkwalite, Mings ghọrọ ọkacha mmasị nke ndị ọkacha mmasị. N’oge na-adịghị anya, ọ ghọrọ otu n'ime ihe nchebe kachasị ewu ewu na England. Uzo di otu a mere ka o nweta onodu ndi otu England. O mekwaara ya otu egwuregwu ndi otu ndi Bekee mepere nke ndi chachapuru site n'aka ndi Bulgarian.
Lee, nwatakịrị nwoke bibu ebe obibi na-enweghị ebe obibi, na-agba ifuru ugbu a n'anya ndị egwuregwu bọọlụ. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na England n'oge mbụ ya, o doro anya na ọtụtụ ndị egwuregwu bọọlụ ga-ajụrịrị onye nwanyị nwanyị Tyrone Mings nwere ike ịbụ. Enweghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na ama ama ya, mara mma na-ejikọ ya na ịdị elu nke 6 ft 5 agaghị eme ka ọ ghara iguzogide na ụmụ nwanyị.
Ọnye na-bụ Tyrone Mings Girl Girl
Agbanyeghị, n'azụ onye ọkpụkpọ egwuregwu na-aga nke ọma, enwere otu enyi nwanyị mara mma nke a na-amachaghị ihe banyere ya. Eziokwu bụ - N'oge edere, enwere ike zoro ezo nke Tyrone Mings zoro ezo bụ nke na-agbanahụ nyocha nke ndị mmadụ n'ihu naanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya dị nzuzo ma bụrụkwa nke na-enweghị ihe nkiri.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Ndụ nke Onye
Tomara Tyrone Mings Ndụ nke onwe ya pụọ ​​n'ihe ndị ọ na - eme n'ọhịa ga - enyere gị aka ịmatakwu ụdị onye ọ bụ.
Amalite, Mings bụ onye siri ike nke nwere ọgụgụ isi ma na-arọkarị nrọ maka ịdị ukwuu. N'ịpụ na football, ọ na-etinye oge dị ukwuu na mgbatị ahụ iji wulite ike ya na ahụ ike. N'èzí na football, Mings na-ahụ onwe ya dị ka onye ọchụnta ego. Ị maara?… O nwere ụlọ ọrụ na-ahụ maka ime ụlọ na Bournemouth.
Ghọta ụdị Tyrone Mings n'ọdụ ụgbọ elu. Ekele diri IG
Ọzọkwa na Tyron Mings Personal Life, ọ bụ onye anaghị achọ ọdịmma onwe ya naanị nke hụrụ n'anya inyere ndị ọzọ aka n'enweghị olileanya inweta ihe ọ bụla. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ na-eso ndị ezinaụlọ ha ụbọchị ụbọchị Krismas Tyrone Mings na enyi ya nwanyị na-enye oge ha ka ndị ihe na-agaghị agaziri n'ụlọ ebe obibi na-enweghị nri, na-eri nri na ihe ndị bara uru.
Tyrone Mings laghachiri ihu ọma site na ịga na inyere ndị mmadụ aka na ebe obibi enweghị ebe obibi. Ebe E Si Nweta: Kpakpando Ipswich
N’enweghị mgbagha, Tyrone Mings Ndụ nke onwe ya ka enwere mmetụta ọmịiko na ike mmetụta nke mmụọ.
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Ndụ Ezinụlọ
Akụkọ banyere ezinụlọ Tyrone Mings akụziworo ọtụtụ ndị na-agba mgba, ma na-achọ inweta oke na 'bestzọ kachasị mma iji chee na enweghị olileanya bụ ibili mee ihe'. Dị ka n'oge edere, Tyron Mings emehiewo ezinụlọ nke ya n'oge gara aga maka nnwere onwe ego, ekele niile maka football. Ugbu a, ka anyị nyekwuo gị nghọta banyere ndị òtù ezinụlọ ya.
Matakwu banyere Tyrone Mings Father: Football n'ime ezinụlọ ebidobeghị Tyrone. Ị maara?… Nna ya Adie Mings bụbu onye egwu na-enweghị asọmpị Bath City na Gloucester City. Obi mgbaghara mmehie nke Tyron Mings enyerela aka ijikọ ma nna ma nwa nwoke. Ị maara?… Ma nna ma nwa nwoke ka na-azụ ahịa ụdị ọrụ ahụ. Adie Mings dịka n'oge ederede na-arụ ọrụ dị ka onye Scout maka Chelsea Football Club.
Tyrone Mings nwere nna ya - Adie Mings. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Matakwu banyere Tyron Mings Mama: Dawn Johnson bagan ga-aza aha nna ya mgbe o kewapụsịrị na di ya afọ ole na ole mgbe ha zutere. Dawn, nne siri ike anaghị agwa nwa ya nwoke, ka ọ daa mba ka anụ ọhịa wolf nke isi ike nwere ike inweta ya. Kama nke a, gbara ya ume ma kwado ya n'oge ọ na - achọ ịdị ukwuu. Dawn mara mma na nwa ya nwoke n'oge a na-ede akwụkwọ, nwere obi ụtọ ugbu a na ndụ kachasị mma.
Tyrone Mings na nne ya - Dawn Johnson
Matakwu banyere Tyrone Mings Siblings: Sistersmụnne nwanyị Mings bụ Cherrelle Mings, Iesha Mings na onye ọzọ amabeghị ihe banyere ya. N’ịkele maka ụmụnne ya nwanyị, ka ha guzo n’akụkụ ya n’oge nsogbu ya, Mings kwuru n’okwu ya “Ọ dịtụghị m mkpa ndị enyi na-etolite n'ihi na enwere m ụmụnne m ndị nwanyị“. Dị ka n'oge edere, otu n'ime ụmụnne ya nwanyị aha ya bụ Cherrelle Mings nwere aha ugbu a (Cherrelle Baram) alụọla nwanyị.
Tyrone Mings nwere ụmụnne ya nwanyị mara mma- Cherrelle (n'aka ekpe) na Lesha (n'aka nri) bụ ndị lekọtara anya nne ha .. Kredit: IG
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - si ebi ndụ
Tomata ụdị ndụ obibi Tyrone Mings ga-enyere gị aka inweta nkọwa zuru oke banyere ụkpụrụ ibi ndụ ya. Bido, ọbụlagodi ị na-akpata ọtụtụ ego bụ ihe ọjọọ dị mkpa, Tyrone Mings ahụghị onwe ya ka ọ na-ebi ụdị ndụ dị mfe site na ụgbọ ala na ụlọ ndị nwere flashy mara. Ọ na-anya ụgbọ ala nke onye na-agba bọl, nke ihe ịrịba ama nke gosipụtara ibi ndụ dị ala.
Tyrone Mings na-agba'sgbọ ala nke onye egwuregwu ukwu kacha elu. Ebe E Si Nweta Foto: IG
Tyrone Mings na-eme ego zuru ezu nke ọ na-etinye na azụmahịa ya, na-emefu ọrụ ebere ya na nke kachasị, nke ọ na-eji ebi ndụ okomoko na oke osimiri ndị ama ama nke bụ ebe kachasị amasị ya maka ezumike. N'okpuru ebe a bụ foto nke Mings nwere ka ọ na-ekpori ndụ n'ụgbọ mmiri ya.
Ndụ Tyrone Mings- Ọ hụrụ n'anya na-emefu ego ya na oke osimiri na-atọ ụtọ njem ụgbọ mmiri. Ebe E Si Nweta Foto: IG
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Eziokwu efu
N'otu oge, ọ kwụghachiro ndị akwụ ụgwọ zụtara uwe elu ya ochie: N'otu oge na 2014, Tyrone Mings gbanwere nọmba uwe elu ya na No15 gaa na No3 na-agbaso mbufe Aaron Cresswell na West Ham United. Omume a bịara n'oge na-adịghị anya mgbe ụfọdụ ndị fan ya zụtarịrị riga ya nke No15. Ị maara?… Mings nwere mmesapụ aka nke na o kwere nkwa ịzụta uwe ọhụrụ maka ndị fan zụtara uwe elu ya na nọmba 15 ochie ya e biri ebi na azụ.
Tyrone Mings- toro maka nnukwu mmegharị ahụ mgbe o bulịrị nkwa ịzụta uwe ọhụrụ maka ndị fan nwere ọnụ ọgụgụ egwuregwu ochie ya. Ebe E Si Nweta Foto- BBC site na GLENN PARKER / TOM PULLEN.
N'otu oge, ọ zọọ ụkwụ na Zlatan Ibrahimovic Isi: Tyrone Mings mere ihe jọgburu onwe ya- nke a na-enyo enyo na isi Zlatan Ibrahimovic, bụ ihe mere nke mere ka amachibido ya egwuregwu ise. N'ihi na ọ “Zlatan“, Zlatan enweghị ihe mgbu ọ bụla na egwuregwu ahụ wee na-abọ ọbọ n'isi ya.
Tyrone Mings nwere akara zlatan Ibrahimovics ozugbo. Ebe E Si Nweta: TheSun
Naanị obere oge mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Zlatan Ibrahimovic jiri ohere ahụ wee bọọ ọbọ ya na Mings. N'oge a, ndị Sweden na-ama aka ekpe ya n'oge ọkpọ nke na-ekwu na ọ bụ Mings bụ onye na-enweghị ihu ọma gbabara n'ikpere aka.
Tyrone Mings na Zlatan Ibrahimovic Feud. Ebe E Si Nweta Foto: TheGuardian
N'agbanyeghị ikiaka ahụ, ọ bụ Tyrone Mings natara mmachibido iwu ogologo. Nke a bụ n'ihi na ewere stampe ka ọ dị njọ na-emebi English FA. N'okpuru ebe a bụ mpempe vidiyo vidiyo nke Mings na-etinye isi na Ibrahimovic na mberede.
Tyrone Mings Tattoo Eziokwu: Tyrone Mings ' ahụ hụrụ ahụ ya dị ka ọghasa ya. O nwere igbu egbugbu nwere nke okike ya puru iche nke n’egosiputa ‘anya, elekere na akara aka’ umuaka nke bu akara nke ahuhu ya na nwata.
Tyrone Mings Tattoo. Ebe E Si Nweta Foto: JasonPixs na Instagram
Tyrone Mings Football Academy: Tyrone Mings nwere ụlọ akwụkwọ football a na-akpọ “Tyrone Mings Academy”Nke dabeere na Birmingham, England. Thelọ akwụkwọ ahụ na-anabata ụmụaka (ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị) nọ n’agbata 6 na 16. Inwe ulo akwukwo bu uzo ya iji nyeghachi ndi mmadu aka site na ahia ya.
The Tyrone Mings Academy. Ebe E Si Nweta Foto: TMA
Tyrone Mings Childhood Akụkọ Ntanetị Ihe Ndị Na - adịghị Eke Ndụ - Video Nchịkọta
Chọta n'okpuru Nchịkọta vidiyo YouTube anyị maka profaịlụ a. Obiọma Gaa & denye aha anyị Youtube ọwa. Ọzọkwa, pịa ndenye aha Bell Icon maka tima Ọkwa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Tyrone Mings Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ akụkọ Aston Villa